Meizu 16s: atụmatụ, imewe na ọnụahịa nke ọhụrụ ọnụ ala android | Gam akporosis
Meizu 16s abụworị eziokwu. Anyị na-agwa gị nkọwa niile
Nerea Pereira | | Meizu
Ọ bụghị nke mbụ anyị na-agwa gị gbasara ya Meizu 16, flagship a na-atụ anya nke ụlọ ọrụ Asia nke ga-egosipụta ịgwa banyere a oké foto ngalaba. Ọbịbịa ahụ adịwo anya, mana anyị nwere ike mechaa gosipụta nkọwa niile atumatu na atụmatụ nke ekwentị gam akporo ọhụrụ a dị elu na ọnụ ahịa mbibi. Na, na nnọkọ ogbako, ụlọ ọrụ Shenzhen gosipụtara ekwentị a.
Anyị na-ekwu okwu banyere ihe nlere anya nke nwere ihu 6.2-inch, na mgbakwunye na nha ihuenyo nke ruru 91 pasent ekele inwe obere okpokolo agba. Leziekwa anya, enweghi akara ngosi ka ị ghara imebi aesthetics nke Meizu 16s na ihuenyo. Ka anyị hụ ndị ọzọ nke teknuzu nkọwa nke a na-akpali nlereanya nke ga-abịa na nnọọ mma mma price.
Nzube na njirimara nke Meizu 16s mgbe ihe ngosi ya
Dị ka anyị kwuru, anyị na-ekwu maka a adịchaghị ngwaọrụ. N'ụzọ dị otu a, ahụ Meizu 16s nwere ihe ndị magburu onwe ya iji nye ezigbo mmecha yana mmetụta dị ukwuu n'aka. Na eziokwu na o nwere ọkpụrụkpụ nke naanị 7.6 mm na ibu nke 165 grams, mee ka ihe nlere a bụrụ ezigbo njikwa. Lezienụ anya, Meizu 16s bụ ngwaọrụ nwere ngwaike ngwaike n'ezie.
Iji malite, anyị na-ahụ ihuenyo nke Super AMOLED guzobere na ntụgharị 6.2-inch nke ruru mkpebi HD zuru ezu. Na nke a, anyị ga-agbakwunye nhazi Qualcomm Snapdragon 855 yana Adreno 640 GPU na nsụgharị abụọ nwere 6 ma ọ bụ 8 GB nke RAM iji nye ọrụ na-enweghị atụ. Ee ee, anyị ga-enwe nsụgharị abụọ na 128 na 256 GB nke nchekwa dị n'ime, nhazi nke ga-egbo karịa mkpa onye ọrụ ọ bụla.
Ekwentị, nke na-abịa na A gam akporo 9 achịcha N'okpuru ogwe aka, o nwere sistemụ igwefoto abụọ nke mebere 48 megapixel abụọ sensọ nke Sony (abụọ sensọ IMX 586 na IMX 350 bịanyere aka) iji nye ngalaba foto dị mma. Otu n'ime ekele maka usoro nyocha ihe oyiyi ya, ọnọdụ abalị na igwefoto 20 megapixel na ihu ihu na ọnọdụ HDR +.
Banyere ụbọchị igba egbe na Meizu 16s price, ụdị niile ga-erute ahịa Eshia na Eprel 28 na ọnụahịa nke yuan 3198, ihe dị ka euro 430 iji gbanwee maka ụdị ahụ na 6 GB nke RAM na 128 GB nke nchekwa dị n'ime, 3498 yuan, ihe dịka 490 euro iji gbanwee, maka ụdị ahụ na 8 GB nke Ram na 128 GB nke ebe nchekwa dị n'ime, ma ọ bụ 3998 yuan (ihe dị ka euro 550 iji gbanwee) maka ụdị vitamin ọzọ na 8 GB nke RAM na nchekwa 256 GB.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Meizu » Meizu 16s abụworị eziokwu. Anyị na-agwa gị nkọwa niile
Realme na-azọ ụkwụ na ala ndị China: ọ ga - eme ka mbara igwe ya gbasaa karịa n'oge na - adịghị anya
OPPO A1K: Uzo ohuru nke uzo ohuru